WAR DEG DEG AH: TALIYIHII MARYACALASTA SNM “GEN SHAQALE” OO DHAAWICISII LOOLA CARARAY HARGEYSA – Codka, shacabka, SSC, wararkii ugu dambeeyey
WAR DEG DEG AH: TALIYIHII MARYACALASTA SNM “GEN SHAQALE” OO DHAAWICISII LOOLA CARARAY HARGEYSA
Allssc(Hargeysa, Somalia): Warar lagu kal soon yahay oo naga soo gaadhaya magaalada Hargeysa ee oo looga arimiyo jabhada SNM wuxuu sheegayaa inuu soo gaadhay dhaawicii taliyihii maryacalasta SNM oo loogu yeedho “Gen Shaqale” . Shaqale ayaa sidii wararkii horeba aanu idiinku soo gudbinay kormeer ugu tegay maryacalasta SNM ee ku sugan gobolka Sool siiba aaga Xudun. Ninkan ayaa shir la galay qaarka mida odayaasha deeganka isagoo ka codsaday inay la shaqeeyaan jabhada marin habowsan ee SNM.
Odayaashii uu la kulamay ayaa afcad ugu sheegay inaanay la shaqaynayn lana shaqayn doonin una sheegay inuu si nabada ula baxo maryacalasta uu meesha ugu yimi. intaas kadib waxaa ka war healy ciidamada xaq u dirirka Khaatumo state oo rasaas ooda kaga qaaday aaga ay ku sugnaayeen jabhada SNM iyo sarkaalkoodan lagu magacaabo Shaqale. Wararku waxay xaqiijinayaan in gaadhigii uu saarnaa jabhad Shaqale uu ku habsaday madfac, kadib uu dhaawac halis ahi soo gaadhay Gen Shaqale. Ninkan ayaa hada lagula tacaalayaa mid ka mida cisbitalada magaalada Hargeysa loona diiday in la arko.
Wixii wara ee soo kordhana kala soco, warbaahinta codka shacabka Allcssc.com